Stage yakagadzika Saudi Style! 1000+ Nyanzvi dzePfungwa dzekuenderera neNew Trends yeWorld Tourism
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Stage yakagadzika Saudi Style! 1000+ Nyanzvi dzePfungwa dzekuenderera neNew Trends yeWorld Tourism
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Investments • nhau • vanhu • Kuvakazve • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Chengetedza mari muHumanity, chiito uye mhedzisiro ndizvo zvakakosha zvigadzirwa zvakagadzwa neSaudi Arabia Tourism Gurukota repasirese. Saudi Arabia yakakoka 1000+ yevatungamiriri vakapenya uye vane mukurumbira kutungamira kune iri kuuya Remangwana Investment Initative kuKAICC muRiyadh, Gumiguru 26-28.
Ramangwana reInvestment Initiative rakavakirwa muRiyadh nemahofisi mune mamwe matunhu epasi.
26-28 Gumiguru, 2021 chiitiko chegumi chegumi chakanzi "Invest in Humanity" panzvimbo yacho ndiyo Hotera muRitz-Carlton uye naMambo Abdulaziz International Conference Cente (KAICC) muRiadh muSaudi Arabia
Iyo Saudi Arabia Ministry of Tourism yakakoka 1000+ vatungamiriri vevashanyi, kusanganisira makurukota ezvekushanya kubva pasirese, kuti vagadzire danho rezvekushanya kwepasirese kwepasi rose, kudyara nekuita.
Saudi Arabia iri kubuda yese, uye sekuratidzwa kwakawanda panguva yedambudziko re COVID-19, Gurukota rezveKushanya kuhumambo HE Ahmed Al-Khateeb iye zvino akawedzera nguva yekushanya kuhurukuro. Akakoka 1000+ vatungamiriri vevashanyi kubva kune veveruzhinji uye akazvimirira zvikamu kune ichauya FII chiitiko muRiyadh.
Nezve zvese zviyero, FII yakachinja kubva ku "Invest in Humanity" nhaurirano kuita chiito-chizere chinotungamira chekufamba kwepasirese uye kudzoreredza kwekushanya.
Musi waMay 26, 2021, iyeye Gurukota reSaudi Tourism akaunza chiono chake pamusoro pekushanya kwepasirese, paakabata Musangano Wekudzokorodza Tourism neWorld Tourism Organisation (UNWTO)
Mwedzi mitanhatu gare gare zvinoratidzika Zurab Pololikashvili, UNWTO Secretary-General anoona FII muRiyadh zvakanyanya semakwikwi uye akasheedzera UNWTO World Tourism Congress muBarcelona ichipesana zvakananga nemisi yakatarwa neFII muRiadh.
The nzira imwechete yakashandiswa apo UNWTO yakaronga musangano wakakosha panguva imwe chete WTTC yaive nemusangano wayo wepasi rose muna Chivabvu muCancun, Mexico.
UNWTO irikuzvibata semwana
eTurboNews akabvunza muna Kubvumbi kana izvi zvakaitwa kuti WTTC Summit ikundikane? UNWTO iri kuronga kukwikwidza nehurongwa hweSaudi Arabia? Chirevo-pasi-pasi chingati: UNWTO irikuzvibata semwana.
Nhumwa yeUNWTO uye gurukota rakakokwa kuBarcelona ratoudzwa eTurboNews iye aizoenda kuSaudi Arabia.
Chii chinonzi Ramangwana Investment Initiative (FII)?
Iyo Yemberi Investment Initiative (FII) ipuratifomu yepasi rese yehunyanzvi-inotungamirwa gakava pakati pevatungamiriri vepasirese, vatengesi, uye vagadziri vane simba rekuumba ramangwana rekudyara kwepasirese. Iko kutarisisa kuri kushandisa mari yekudyara kutyaira mikana yekukura, kugonesa hunyanzvi uye hunokanganisa matekinoroji, uye kugadzirisa matambudziko epasirese.
Iyo FII Institute inotarisana nenzvimbo shanu:
Nekutungamira kuyedza uye zviwanikwa kuminda iyi, FII inotenda kuti inogona kuumba hunhu hwakanaka pavanhu.
FUNGA, XCHANGE, ACT
FII Institute inovakwa pamusoro pembiru nhatu - FUNGA, XCHANGE, CHITSAUKO - kuburikidza nesu patinoteedzera zvinangwa zvedu kubva kune yakasimba ESG nheyo. Iyo FUNGWA mbiru inopa simba kupenya kwepasirese kuziva nzira dzakanakisa kune ramangwana rakajeka.
Mbiru yeXCHANGE inogadzira mapuratifomu apo nyanzvi, vagadziri, vatungamiriri, uye vanoita mari vanouya pamwechete kuti vagoverane ruzivo uye vashande pamwe chete mukuchinja. Chekupedzisira, iyo ACT mbiru inotsvaga uye inotsvaga mune hunyanzvi matekinoroji achivimbisa pasirese akakosha chaiwo-epasirese mhinduro.
Mumwe musiyano paFII Institute ndiko kuomerera kune zvakaenzana, zvinosanganisa ESG misimboti senzira yekumberi yekusimudzira kwepasirese uye neramangwana rakajeka. Isu tinovavarira kuwedzera kuzivisa nezve uye nekuvandudza kuitiswa kweESG zviyero uye chivimbiso chekutarisira zvine mutsigo zviwanikwa zvedu zvezvemagariro, zvemagariro, uye zvehutongi kutevedzera izvo zvirevo.
FII Institute kiyi kusiyanisa nemamwe maitiro akafanana mukuita. FII inotora yekuedza-inotungamirwa kuyedza kupfuura yakajairwa chiyero nekutora matanho kuburikidza nekudyara mune ramangwana-rakatarisana, chaicho-nyika mhinduro.
FII inozivikanwa kuve inonzwika mukudaidzira nharaunda yepasirese kuti itore matanho, kugadzira mapuratifomu uko mazano akasimudzwa, uye nekuchengetedza mari yekuita kuti ive yechokwadi.
Muchidimbu, chinangwa cheFII Institute ndechekugadzirisa uye kugonesa mazano ekugadzirisa matambudziko epasirese epasirese kuburikidza nehunyanzvi uye hwakasimba matekinoroji.
Iyo inouya Investment muHumanity chiitiko yaigara iine maviri chaiwo matanho ekushanya akanyorwa:
Postcard kubva mune ramangwana, kuisa mari mukuchengetedza kushanya.
Bhizinesi uye zororo rekufamba kune inoenderera nyika.
Mukuwedzera 1000+ vatungamiriri vevashanyi kuhurukuro yeFII, indasitiri yekufambisa ine mukana uye mukana wevatungamiriri wekusangana kuti vaungane pamwe pasina chimwe chiitiko kubva pakatanga denda.
Dare reMatirastii reFII:
Gavhuna PIF, Sachigaro Saudi Aramco Saudi Arabia
HRH Mambokadzi Reema Bint Bandar
Mumiriri weKSA kuUSA Saudi Arabia
Iye Seneta Matteo Renzi
Italian Senator weFlorence uye aimbova Mutungamiriri weItari
Iye HE Mohamed Al Abbar
Muvambi & Managing Director EMAAR zvivakwa United Arab Emirates
Muvambi X-Prize Foundation & Singularity University USA
Purofesa Tony Chan
Mutungamiri waMambo Abdullah Yunivhesiti yeSainzi neTekinoroji (KAUST)
Purofesa Pharmaceutical Chemistry, University of California (UCSD) Saudi Arabia